दाइबुचु : कला र साहित्यको संगम [यात्रानुभूति] – Chitwan Post
–श्यामजी अतिथि सेढाईं
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुन १०, २०७६
उपरोक्त हाइकु कामाकुरा जापानमा रहेको विशाल बुद्ध मूर्ति र त्यसवरपरका फूल, बगैँचा, प्राकृतिक सौन्दर्य र बुद्धका सन्देशहरु देखेर लेखिएको भावुक मनको अभिव्यक्ति हो । तीन महिनाको जापान बसाइँमा धेरै दर्शनीय स्थलहरुको भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण भएका सुरूङमार्ग, अग्ला विशाल भवनहरु, समुद्रमाथि बनाएको पुल र त्यसमाथिबाट ओहोरदोहोर गर्ने मोनोरेल, समुद्र पुरेर बनाएको बन्दरगाह र विमानस्थल देखेर हामीजस्ता भर्खरै विकास निर्माणमा लागेकालाई अचम्म र अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
भौतिक प्रगति र उच्च प्रविधिमात्रै जापानी जनताको पहिचान होइन रहेछ । जापानीहरु इमानदर, नम्र, परिश्रमी, सहयोगी हुँदारहेछन् । मृदुभाषी जापानीहरु कसैसँग बोल्दा झुकेर विनम्र भावमा आफ्ना कुराहरु भन्ने र अर्काको कुरा उत्सुकतापूर्वक सुन्ने गर्दछन् । कामलाई असाध्यै मह¤व दिने यिनीहरु समयलाई उत्तिकै ख्याल गर्दछन् । ठीक समयमा पुग्नु, तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गराउनु व्यक्तिविशेषको कर्तव्य ठान्दछन् भने सार्वजनिक यातायातको सही समय व्यवस्थापनमा पनि उनीहरु चुकेका छैनन् । चाहे बस र रेलमा चढ्दा वा झर्दा होस्, चाहे विमानस्थलमा वा बन्दरगाहमा हवाईजहाज वा पानीजहाजमा आउने–जाने गर्दा होस्, समयमा अलिकति पनि तल–माथि पर्दैन । ती यातायातका साधनहरु तोकिएको समयमा आइपुग्दछन्, समयमै त्यहाँबाट छुट्छन् । यस प्रकारको समय व्यवस्थापनले जापानी जनतामा काममा तीव्रता, गतिमा शीघ्रता र विकासमा अनुकूलता ल्याएको कुरा संसारले बुझिसकेको छ । सुदूरपूर्वको देश जापान छिटै विकास हुनुमा यिनै गुणहरु विद्यमान भएर हो जस्तो लाग्छ ।
खासगरी, जापानीहरु सिन्तो धर्म र बुद्धधर्म मान्दछन् । क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरु थोरैमात्र छन् । सहरका हरेक ठाउँमा कि त बुद्ध मन्दिर देखिन्छ कि सिन्तो स्राइन छन् । बुद्ध मन्दिरमा प्रवेश गर्ने द्वार नेपाली शैलीकै दुवैपट्टि पक्की खम्बा बनाएर माथि छानो राखिन्छ भने सिन्तो स्राइनमा प्रवेश गर्दा दुईतिर काठ वा कंक्रिटको खम्बा र माथि कंक्रिटकै खम्बा तेस्र्याएर बनाएको हुन्छ । त्यसलाई जापानी भाषामा ‘टोरिगेट’ भनिन्छ । प्रवेशद्वारबाट भित्र गएपछि हातमुख धोएर शुद्ध हुन पानी ट्याङ्की राखेको हुँदोरहेछ । साथै, ट्याङ्कीमा घोप्टो पारेर बाँसको बेड भएको डाडु राखेको हुन्छ र त्यसैले पानी उबाएर हातमुख धोई शुद्ध भएर मन्दिरअगाडि उभिएर दुईपटकसम्म शिर झुकाएर देवदर्शन गर्ने अनि त्यहीँ झुन्डाएको तीनवटा डोरी हल्लाएर घण्ट बजाउने । नजिकै राखेको दानपात्रमा सिक्का खसाइदिने चलन पनि रहेछ । त्यसपछि पुनः बुद्ध भगवान्प्रति शिर झुकाएर पछाडि हट्ने । जापानीहरु जन्म संस्कार सिन्तो धर्मअनुसार, विवाह क्रिश्चियन र मृत्यु संस्कार बुद्ध धर्मअनुसार गर्ने कुरा म बसेको घरनजिकको सिन्जेन स्राइनका सन्तसँगको कुराकानीबाट थाहा भयो ।
जापानमा सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु सम्मेलनको अन्तिम दिन १६ सेप्टेम्बर २०१९ मा नेपाली प्रतिनिधि प्रा. रामकुमार पाँडेको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाली रेस्टुरेन्टको मुरा हलमा बेलायत निवासी कृष्ण बजगाईंको नियात्रासंग्रह दाइबुचु विमोचनको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाको निम्तोमा मैले पनि विशिष्ट अतिथिका रुपमा भाग लिएको थिएँ । त्यसैबेला मैले दाइबुचु भनेको बुद्धको विशाल मूर्ति भन्ने थाहा पाएँ । त्यसैदिनदेखि मलाई दाइबुचु हेर्न जाने इच्छा पलाएर आयो । योजना बनाएँ । दुई जना जापानी मित्रहरु हितोमी, आसुमी, नाति कञ्चन र श्रीमती रुपादेवीको साथ पाएँ । हितोमीले आफ्नो निजी गाडीमा लिएर जानुभयो ।
हामी योगाहामा बिचनजिकै कामाकुरा सहरमा अवस्थित दाइबुचु बुद्धको विशाल मूर्ति भएको ठाउँमा पुग्यौँ । आफ्नै मातृभूमि नेपालमा जन्मेका बुद्ध कामाकुरामा पुगेर त्यो अवस्थामा रहनु र संसारका धेरै आगन्तुकहरु बुद्ध दर्शनका लागि लालायित भएको देखेर म अत्यन्त भावुक बनेँ । बुद्धको मूर्तिलाई सातपटक परिक्रमा गरेर पाउ छोएर दर्शन गरेँ । मजस्ता हजारौँ पर्यटकहरु त्यहाँ उपस्थित थिए । कोही पहेँलो वस्त्रधारी लामा गुरू थिए । गोरो छाला, कालो छाला अनि एसियाका मंगोलहरु थिए । सबैले बुद्धको शान्ति र अहिंसाप्रति आस्था प्रकट गरे । जापानको पर्यटकीय क्षेत्र हो यो, बुद्धले बास गरेको स्थान कामाकुरा । यो जापानको प्राचीन राजधानी पनि हो । त्यसबेला त्यहाँ सामुराई वंशका शासकहरुले १४० वर्षसम्म शासन गरेको कुरा जापानको इतिहासले बताउँछ । यो लडाकु जाति हो । एकातिर समुद्र र तीनतिर पहाडले घेरिएको सुरक्षित राजधानीलाई विश्व विजेता बन्न हिँडेका मंगोलियन सम्राट् चंखेज खाँले परास्त गर्न सकेनन् । भौगोलिक प्रतिकूलताकै कारण धेरैपटक उनको प्रयास खेर गयो । मेइजी शासनपछि सामुराईको अन्त्य भयो । तथापि, जापानमा बुद्धधर्मको प्रवेश गराउने कामको श्रेय भने शासकलाई नै जान्छ । यही शासनकालमा जापानमा बुद्धधर्मलाई राजधर्म घोषित गरेर देशैभरि बौद्ध दर्शनको प्रचारप्रसार गर्ने काम भएको देखिन्छ । शान्तिप्रेमी जापानी जनताले बुद्धको अहिंसा र शान्तिको मार्ग अपनाएर जहाँतहीँ बुद्ध मन्दिरहरु निर्माण गरे । त्यसै क्रममा सन् १२५२ मा त्यसबेलाको शासकले राजधानी कामाकुरामा दाइबुचु बुद्धको विशाल मूर्ति स्थापना गरी बुद्धका उपदेशहरु जनजनमा पु¥याए । यी सबै ऐतिहासिक तथ्यहरु थाहा पाउन मन्दिर परिसरभित्र सुरक्षित राखिएका शिलालेख, त्यहाँ भएका अभिलेख र वितरण गरिएका पर्चा तथा पम्प्लेटबाट जानकारी लिन सकिएको हो ।
कामाकुरा सहरमा स्थापना भएको विशाल बुद्ध मूर्ति दाइबुचुले जापानको धर्म–संस्कृति र साहित्यप्रति लक्षित गरेको देखिन्छ । यसको ऐतिहासिक पक्ष पनि सबल छ । मैले सोचेको थिएँ, यहाँ बुद्धका उपदेशहरु जताततै टाँगिएका होलान्, बौद्ध दर्शनका पुस्तक तथा पुस्तिकाहरु बिक्रीवितरणका लागि राखिएका होलान्, बुद्ध मूर्तिमा पूजा गर्न धूप, दीप नैवेद्यहरु चढाइँदो होला, लामाहरु माने घुमाउँदै परिक्रमा गर्दाहुन्, तर त्यहाँ मैले सोचेका कुराहरु भन्दा भिन्दै परिवेश रहेछ । मन्दिरको मूलद्वारबाट प्रवेश गर्नासाथ पत्थर र धातुको पातामा लेखिएका कविता, हाइकु, ताङ्का जताततै देख्न र पढ्न पाइँदोरहेछ । प्रशिद्ध हाइकुकारका सिर्जनाहरु लेखेर झुन्डाइएका छन् यहाँ । ठूला–ठूला सूचना पाटीहरुमा जापानी र अंग्रेजी भाषामा लेखिएका ऐतिहासिक मह¤वका विषयहरुले पर्यटकहरुको ध्यान आकर्षण गराएको छ । जापानी गाइडहरुले त्यहाँका सबै कुराहरु प्रस्ट्याएका छन् । बुझ्नुपर्ने कुनै कुरामा द्विविधा र अप्ठेरो छैन ।
जापानको पर्यटकीय इतिहासमा प्रशिद्धि पाइसकेको दाइबुचुको बनावट र कलात्मक दृश्यावलोकन गरेर विश्वका पर्यटकहरु तीनछक पर्छन् र यसकै विषयमा अन्वेषण गर्दै कविता, नियात्रा, हाइकु, ताङ्का लेखेर विश्वसाहित्यमा योगदान पु¥याइरहेका छन् । विशाल बुद्ध मूर्ति दाइबुचुको निर्माण सम्पन्न भयो, निर्माण हुनुमात्रै ठूलो कुरो होइन तर जापानी मूर्तिकारले जुन जीवन्त कला प्रदर्शन गरेर संसारलाई देखाए त्योचाहिँ मह¤वपूर्ण काम हो । त्यहाँ व्यक्त भएका कलाको अध्ययन गर्न सक्ने कला पारखीले बुद्धको सरलता, दया, अहिंसाका शाश्वत गुणहरु सदा अमर रहेको भाव बुझ्दछन् । जापानी होनहार कवयित्री तथा नारीवादी लेखिका अकिको योसानोले दाइबुचुको बारेमा लेखेको एउटा सानो चर्चित कविता सबैले देख्ने स्थानमा राखिएको छ । कवितामा उनले बुद्धलाई ह्यान्डसम म्यान अर्थात् सुन्दर मानव भनेर चित्रण गरेकी छन् । त्यसरी नै कामाकुराको यात्रा गरेर नोबेल पुरस्कार विजेता बेलायती कवि रूडयार्ड किपलिङले बुद्ध एट कामाकुरा भन्ने चर्चित कविता लेखेर बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरेका थिए । यसरी जापानीहरुले बुद्धको विशाल मूर्ति स्थापना गरेर उनकै प्रेरणाबाट यस ठाउँलाई साहित्य सृजना गर्ने स्थल बनाएका छन् ।
मन्दिर परिसरमा रहेको एउटा फ्लेक्स प्रिन्टमा बुद्ध मूर्ति दाइबुचुको आकारप्रकारको बारेमा अंग्रेजी भाषामा यसरी लेखिएको छ– करिब चवालीस फिट उचाइको उक्त बुद्ध मूर्तिको अनुहारको लम्बाइ सात फिट नौ इन्च, आँखाको लम्बाइ छ फिट तीन इन्च, मुखको लम्बाइ दुई फिट आठ इन्च, कानको लम्बाइ ६ फिट तीन इन्च र पलेँटी मारी बसेको उक्त बुद्धको मूर्तिको एउटा घुँडादेखि अर्को घुँडासम्मको लम्बाइ उनन्तीस फिट नौ इन्च रहेको छ । दस वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको उक्त मूर्तिको तौल १२१ टन छ । अनौठो कुरा के छ भने त्यो मूर्तिको गर्भगृहमा हेर्न जान सकिन्छ । टिकट काटेर भ¥याङ ओर्लिएर तल झरेपछि मूर्तिको गर्भगृहमा पुगिन्छ । त्यहाँबाट मूर्तिको भित्री भाग सबै देखिन्छ । मूर्तिको भित्री भागमा पुग्दा ओडारभित्र पसेजस्तो लाग्छ । हामी मूर्तिभित्र घुम्दै हेर्दै गरी पुनः त्यही बाटो भएर बाहिर निस्कन्छौँ । मेरो नजर बुद्धकै वरिपरि घुमिरहन्छ । हेर्दै जाँदा बुद्धको शिर अगाडि झुकेको र अनुहार थोरै जापानीको जस्तो देख्छु ।
बेस्सरी नै नियाल्छु, हो वास्तवमा शिर झुकेकै छ । अनुहारमा थोरै भिन्नता देखिन्छ । किन झुकाइयो बुद्धको शिर ? थोरै भए पनि अनुहारमा फरकपन किन आयो ? पछि सोचेँ कि समाजको संस्कृति र मान्यताले मूर्तिकला क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि प्रभाव पार्दछ । जापानीहरु विनम्र स्वभाव र कसैसँग बोल्दा वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा झुक्ने गर्दछन् । यही सभ्यता र संस्कृतिको प्रतिबिम्ब कलाकारले आफ्नो कलामा उतारेका होलान् जस्तो लाग्यो । करिब तीन घन्टासम्मको कामकुराको बसाइँमा यहाँका अन्य कुराहरु सोध्ने र बुझ्ने जिज्ञासा भइरह्यो ।
मन्दिर परिसरमा एक घन्टाजति घुमेर हेरेर हामीहरु नजिकै रहेको समुद्रको बिचतिर टहलिन गयौँ । त्यहाँ पनि दाइबुचु हेर्न आएका स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरुको घुइँचो थियो । एक घन्टाजति त्यहाँ डुलेर पुनः बुद्ध मन्दिर परिसरभित्रै प्रवेश गरी छिटपुट कुराहरु बुझ्नतिर लाग्यौँ । त्यत्रो विशाल परिसर क्षेत्रमा धेरै संरचनाहरु बनेको देखियो । तर, बुद्धको मूर्ति खडा गरेको ठाउँमा न त कुनै छानो थियो न त मन्दिर नै । खुला आकासमुनि घामपानी र कडा आँधीबेहरी सहेर भगवान् बुद्ध बसेको देखियो । सोधखोज गर्दै जाँदा त्यहाँ सन् १३३४ र १९६९ मा भयानक समुद्री आँधी आएर मन्दिरको छानो उडाएर लगेछ । पछिल्लोपटक महाभूकम्पले मन्दिर खण्डहर बनाइदिएछ । जतिपटक मन्दिर जीर्णोद्धार गरे पनि हावाहुरीमा नटिक्ने र बुद्धको मूर्तिचाहिँ केही नहुने घटनाले आजसम्म मूर्ति खुला आकासमुनि नै रहेको छ । तर, मूर्तिलाई आजसम्म केही नोक्सान पु¥याएको छैन । शक्तिशाली बुद्ध मूर्तिलाई प्रकृतिले पनि संरक्षण गरेर आजसम्म जस्ताको तस्तै राखेको छ ।
दाइबुचुवरिपरि घुम्दै गर्दा हाम्रो नजर एक जोडा परालको ठूलो चप्पल झुन्डाइराखेको भित्तामा पर्छ, अनौठो पनि लाग्यो । किन यसरी परालको चप्पल झुन्डाइएको होला । कसले लगाउँछ यस्तो चप्पल, यो जान्न हामी उत्सुक भयौँ । वास्तवमा के रहेछ भने दोस्रो विश्वयुद्धको भुमरीमा पिल्सिएका अबोध बालबालिकाहरु भयत्रासले आतङ्कित भएका थिए । शान्ति खल्बलिएको थियो । अमनचयन थिएन । त्यसैले, बालबालिकाको मनमा भगवान् बुद्धबाट मात्र यो संकट टर्न सक्छ भन्ने विचार आयो र सन् १९५१ मा मात्सुज चिल्ड्रेन क्लबका बच्चाहरुले बुद्धको पाउमा ठीक हुने गरी परालको चप्पल बनाएर त्यहाँ राखिदिएका रहेछन् । भगवान् बुद्धले हामीले दिएको यो चप्पल लगाएर जापानका विभिन्न ठाउँहरुमा घुमी सबैलाई शान्ति र खुसी बाँड्नुहुने छ भन्ने बाल मनोभाव राखेर आजसम्म पनि रहेका ५/५ वर्षमा परालको नयाँ चप्पल बनाएर त्यहाँ झुन्डाइँदो रहेछ । युद्धदेखि त्रसित साना नानीहरुको बुद्धप्रति कत्रो आशा र भरोसा !
हाइकु सम्राट् माचुओ वासोले प्रकृति, मौसम आदिका बिम्ब राखेर लेख्न सिकाएको हाइकु विधा जापानमा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ । उनी बितेर गए पनि उनको लेखन प्रभाव आज विश्वभर फैलिरहेको छ । थोरै अक्षरमा धेरै भाव अटाउन सक्ने यो विधा जापानका विद्यालय, महाविद्यालयमा पढाइ हुन्छ र सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि उत्कृष्ट हाइकुहरु अमरवाणीका रुपमा लेखेर राखिएको हुँदोरहेछ । बुद्ध मन्दिर परिसर हेर्दै जाँदा भित्तामा एउटा लेटर बक्स झुन्डाएर राखेका देख्यौँ । त्यसमा हाम्रो आँखा प¥यो र त्यसको नजिकमा एउटा सूचना लेखेर झुन्डाइएको थियो । सूचनामा भनिएको छ– अंग्रेजी वा जापानी हाइकुलाई पुरस्कृत गरिने छ र राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा त्यसलाई प्रकाशित गरिने छ । सूचनामा यस्तो लेखिएको देख्दा हाइकु लेखनमा अभ्यास नभएका हामीजस्ता पनि प्रेरित भयौँ । मनमा के कुराको छाप बस्यो भने साहित्यको उन्नयनमा जापानले जहाँतहीँबाट प्रोत्साहनको ढोका खोलिदिएको रहेछ । पर्यटन क्षेत्रमा दिनहुँ हजारौँ पर्यटकहरु आउने बुद्ध मन्दिरमा समेत साहित्य र संस्कृतिको सुवास मगमगाएको छ ।
गँगटा र भ्यागुता